सरकार ! बारिमा जाउँ कि ? खाडीमा जाउँ भन्दै चितवनमा किसानको आन्दोलन (फोटो फिचर) - Synergyfm
२३ फाल्गुण २०७७, आइतवार | Mar 07, 2021 | 10:33:24
सरकार ! बारिमा जाउँ कि ? खाडीमा जाउँ भन्दै चितवनमा किसानको आन्दोलन (फोटो फिचर)
By synergyfm on	 February 1, 2021 चितवन सेरोफेरो, प्रमुख समाचार, समाज
नेपाली बजार भारतीय उत्पादनका लागि सहज भए पनि नेपाली किसानका लागि असहज छ । चितवनकै भरतपुरमा रहेको महानगर फलफुल तथा तरकारी बजारमा सहित अन्य ठाउँमा समेत नेपाली किसानका तरकारीले भन्दा भारतीय तरकारीले बढी स्थान पाएका छन् । जसका कारण बैंक र सहकारीबाट चर्को ब्याजमा ऋण लिएर खेती गरेका किसानहरू न्यूनतम मूल्य पनि नपाएपछि आफ्नै उत्पादन ट्र्याक्टर लगाएर नष्ट गर्ने गर्छन् ।
आफूले उत्पादन गरेको कृषिउपजले बजार मूल्य नपाएपछि भरतपुर महानगरपालिका–२६ जुनेली गाउँका नवदत्त अधिकारीलेको १० कट्ठामा लगाएको काउली ट्र्याक्टरले जोते । गत २६ पुसमा बारीमा ट्र्याक्टर लगाएर उनले काउली नष्ट गरेका हुन् । १० कट्ठामा काउली लगाउन उनको झन्डै दुई लाख रुपैयाँ खर्च भएको उनी बताउँछन् । अधिकारी एक प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्, यहाँका किसानले उत्पादन गरेका तरकारी, तरबुजा, काँक्रो, फर्सी, चुकन्दर बिक्री नभएपछि नष्ट गरिएका समाचार सार्वजनिक हुँदै आएका छन् । तर, जिल्लाका सरकारी कार्यालयहरूले किसानको पीरमर्का बुझ्ने र राहतका लागि केही काम गरेको देखिँदैन ।
चितवनमा मंसिरदेखि जेठसम्म जमिनअनुसार गोलभेडा उत्पादन हुन्छ । मुख्य उत्पादनकै समयमा भारतबाट ठूलो परिमाणमा गोलभेँडा नेपाल भित्रिने गरेका छन् । जसका कारण नेपाली किसानले गोलभेँडाको लागत मूल्यसमेत पाउँदैनन् । भारतबाट आएको गोलभेँडाका कारण चितवनका किसान लागत मूल्यभन्दा कममा गोलभेँडा बेच्न बाध्य छन् । भरतपुर–२५, पसाढापका गणेश भुसालले आफूले खेती गर्दै आएको २० बिघामध्ये सात बिघामा गोलभेँडा लगाएका छन् । त्यसमध्ये तीन बिघाको गोलभेडा बजारीकरण गर्ने समय भएको छ । चार बिघामा भने उनले भर्खरै बिरुवा लगाएका हुन् । ‘आफ्नो लागत मूल्य नै २० रुपैयाँ पर्छ, तर व्यापारीले २० रुपैयाँ दिन पनि गाह्रो मान्छन्,’ उनले दुःखेसो पोखे । प्रतिकेजी १५ देखि १८ रुपैयाँमा गोलभेँडा बेच्दै आएका किसान लागत पनि नआउँदा निराश हुनुपरेको बताउँछन् । उपभोक्ताको भान्सामा पुग्दा त्यही गोलभेँडाको मूल्य ५० रुपैयाँ किलोसम्म पर्ने गरेको छ।
भारतीय कृषि उत्पादन नेपालको भन्दा सस्तो छ । भारतमा सरकारले बिउ, मल, प्रविधि सहयोग गर्छ । तर, नेपालमा भने सरकारले केही सहुलियत दिँदैन । ‘भारतमा नेपालको भन्दा आधा खर्चमा किसानले उत्पादन गर्छन् । हामीले मल नपाएर गोलभेँडाका लागि कालोबजारीमार्फत आएको महँगो मल विभिन्न ठाउँमा पुगी खरिद गरेर हाल्यौँ । त्यो पनि देशका विभिन्न सिमानामा पुग्नुपरÞ्यो, देशको अवस्था यस्तो छ । भारत सरकारले बिउ, मल, प्राविधिक र प्रविधिसँगै बजारीकरणमा पनि प्रत्यक्ष सहयोग गर्ने भए उत्पादन लागत निकै सस्तो हुन्थ्यो । स्वाभाविक हो व्यापारीले नाफा बढी हेर्छन् । त्यसैले नेपाली उत्पादन किन्न चाहँदैनन । हाम्रो बजार पनि व्यवस्थित छैन,’ भुसालले भने ।त्यसैले फोनकै भरतमा भारत बाट लाखौको तरकारी भित्र्न्छ । नेपाली बजारमा भारतीय मुलका मानिसहरुनै प्रमुख व्यापारी भएकाले पनि यो समस्या आएको उनको बुझाई छ ।
चितवनका किसान भारतबाट आएका तरकारी टुलुटुलु हेरेर बस्न बाध्य छन् । उनीहरूले यो विषयमा पटकपटक स्थानीय सरकार र प्रशासनमा जानकारी गराएका पनि हुन् । तर, उनीहरूको समस्या कसैले सुनेन । सरकारी निकायले नै बेवास्ता गरेपछि चितवनका किसानहरूले केही दिनदेखि भारतबाट भित्रिने तरकारी गाडी अवरोध गर्न थाले । रातको समयमा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र काठमाडौं प्रवेश नाकामा बसेर भारतीय गाडीलाई उनीहरुले अवरोध गर्दै आएका थिए । खासगरी रातिको समयमा भारतबाट तरकारीका गाडी नेपाल भित्रिने गरेका छन् । यसैबीच, भरतपुर–२४, धम्पुसेका दिलबहादुर गुरुङ (दिपक) लाई शुक्रबार प्रहरीले भारतीय गोलभेँडा बोकेको गाडी नियन्त्रमा लिएर गोलभेँडा नष्ट गरेको भन्दै नियन्त्रणमा लिएको थियो । बिहीबार राति भारतबाट भित्रिएका गोलभेँडा सधै ाझै चितवनका २० भन्दा बढि किसान मिलेर स्थानीय खोलमा लगी भारतीय गोलभेँडा नष्ठ गर्दिएका थिए । अघिल्लो समयमा गोलभेँडा नष्ट गर्दा उजुरी नपरेको भएपनि यस पटक उजुरी परेपछि उजुरीको आधारमा उनलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रहरी प्रवक्ता सूर्यबहादुर थापाले जानकारी दिए । उनीमाथि एक भारतीय गाडी नियन्त्रणमा लिएर गोलभेडा र भेडेखुसार्नी नष्ट गरेको आरोप प्रहरीको छ । गुरुङ्ग पाँचवर्षे इजरायलको बसाइ त्यागेर आफ्नै ठाउँमा व्यावसायिक तरकारी खेती सुरु गरेका किसान हुन् । उनले भाडाको जमिनमा व्यावसायिक तरकारी खेती गर्दै आएका छन् । टाँडी खेत भएकाले उनले पनि यसपटक गोलभेँडाखेती गरेका थिए ।
सरकार ! बारिमा जाउँ कि ? खाडीमा जाउँ भन्दै चितवनमा किसान आन्दोलनमा , आन्दोलन सफल
नेपाली किसानलाई नियन्त्रणमा लिएको विषय संगै विषादी युक्त भारतीय तरकारी तथा फलफुलको विरोधमा चितवनका किसानले आन्दोलननै गरे । आफ्नो उत्पादनले बजार मूल्य नपाइरहेको समयमा भारतीय उत्पादन ल्याएर सस्तो मूल्यमा बिक्री गरेको भन्दै चितवनका किसान आन्दोलनमा उत्रिएका किसानले स्वदेशकै उत्पादनले बजार धान्न सक्ने समयमा दोस्रो मुलुकबाट ल्याएर किसान मार्ने काम रोक्नु माग थियो । उनीहरुले यसको विरुद्धमा भरतपुरको मुख्य सडकमा प्ले कार्ड र ब्यानर सहित र्याली नै गरेका थिए । आइतबार भरतपुरको चौबीसकोठी चोकमा जम्मा भएका चितवन भरीका किसानले चौबीसकोठीबाट हाकिमचोक, केन्द्रीय वस ट्रमिनल, जिल्ला प्रशासन हुँदै जिल्ला प्रहरी कार्यलय अगाडीको खाली चौरमा कोण सभा गरेका थिए । उनीहरुले नेपाली उत्पादनको सम्मान गरौं, किसानमारा विचौलिया दलालहरु होसियार , नेपाली किसानको मर्म छ÷ देशको माटो प्रति गर्व छ , बारिमा जाउँ कि ? खाडीमा जाउँ सरकार ?, स्वदेशी लगानीलाई प्रोत्सान दिउँ, विदेशी विषदी युक्त तरकारी बहिस्कार गरौं लेखिएका प्ले कार्ड बोकेका थिए । भने नेपाली किसान जिन्दावद, विषदी युक्त भारतीय तरकारी बहिस्कार गरौं लगायताका नारा लगाएका थिए । कोण सभा सकेर उनीहरु भरतपुरको फलफुल तथा तरकारी बजारमा समेत पुगे । त्यहाँ पुगेपछि उनीहरुले जिल्ला ताजा तरकारी तथा फलफुल उत्पादक संघ, भरतपुर फलफुल तथा तरकारी थोक बजार व्यवस्थापन समिति र व्यवसायी संघ विच एक खाले सम्झदारी समेत भएको छ । आन्दोलनका संयोजक लेखनाथ भुषालका अनुसार प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएका किसानलाई विना सर्त छाड्ने, भारतीय तरकारी तथा फलफुल यहाँ उत्पादन हुदाको समयमा पुग्ने भए नल्याउने तथा त्यस्तो समयमा नेपाल भित्रीएको जानकारी भएमा प्रशासनलाई बुझाउने सहमती भएको छ । यद्धपी किसानहरु संगको यो सम्झौता व्यवारीक रुपमा व्यापारीले लागुन गर्ने नगर्नेमा भने किसान भने ढुक्क छैनन् ।